Wasiirka Arrimaha Dibadda Oo Ka Hadlay Labo Shir Oo Ka Dhacay Muqdisho – Goobjoog News
Laba shir oo caalami ah oo midkiiba maalin yahay oo ku saabsan Soomaaliya ayaa shalay iyo maanta lagu qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Shirka shalay qabsoomay wuxuu ku saabsanaa amniga. Shirka maanta dhacay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta Dowladnimada iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo weliba isla xisaabtan mid walba goonidiisa loola xisaabtamayo Dowladda Soomaaliya iyo Dowladaha aan saaxiibka nahay iyo ururrada caalamiga ah ee nagala shaqeeya horumarinta dalka.
Madaxweynaya ayaa furay labada shirba. Waxaana soo geba-gebeeyay Ra’iisal Wasaaraha, Waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaasha Dowlad- Goboleedyada Soomaaliya dhammaantood iyo Duqa Caasimadda, Heer Federaal, Golaha Wasiirrada intooda badan ayaa ka jeediyay hadallo ku saabsan waxa qabsoomay iyo qorshaha hadda yaalla waxaa kale oo ka qeyb galay mudanayaal ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka.
Guddiga Doorashooyinka Madax Bannaan ayaa iyaguna soo bandhigay qorshahooda doorashada iyo caqabadaha loo baahan yahay in laga wareejiyo dhabbaha doorashada.
Dowladaha aan saaxiibka nahay oo qaarkood wufuud sare oo casimadahooda ka yimid ay ka soo qeyb galeen waxaa kuwa kale matalayay Danjirayaashooda.
Shirarkani waxay daba joogeen Shirkii London ee ee sannadkan horraantiisii waxa ka qabsoomay in la qiimeeyo.
Is af garad iyo wuxuu ku dhammaaday in shirka kan xiga aan qorshe laga hadal ee laga hadlo waxa qabsoomay.
Maamulidda deegaanka Jaziira oo la is ku haysto (Dhageyso)
Sawirro: Faah Faahin Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Qaraxii Galabta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Gouutu avrtky cialis 5mg cialis 5mg
Txozdd xtssny Viagra order cialis price costco
Cawcpe pmdafq Buy viagra no prescription cialis canadian pharmacy
Uflkgu ufvpml rx pharmacy Crufy
generic viagra india viagra professional cvs viagra...
viagra peak effect how to get rid of red face from viagra wh...
cialis tabletas 5 mg cialis cialis buy cephalexin for dogs M...
[url=http://lasifurex.com/]buy lasix usa [/url] buy lasix 10...